Plastiki Bhegi, Packaging Bhegi, Spouted homwe - Yingzhicai
Qingdao Yingzhicai kavha Co., Ltd.
Qingdao Yingzhicai Packaging Co, Ltd. iri muQingdao Guta, Shandong Province, yakavambwa muna 1996, ichifukidza 9800 mativi emamirimita, iri kushandisa mukugadzira mapurasitiki ekupakata mabhegi, mabhegi eshingi, matatu-mativi chisimbiso, aluminumbags, aluminium mapepa mapepa, stereo (yega. inotsigira) mabhegi, akasarudzika-akaumbwa mabhegi, achibatanidza nefirimu kuridza, kudhinda, kunyora, kugadzira mabhegi, nezvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri senge dairy, chinwiwa, chikafu, condiment, zvipoda, kuwacha zvigadzirwa.
Yemakwikwi mutengo & yepamusoro
Basa rakanaka & chikwereti chikuru
Makore gumi, akatsaurirwa chete mabhegi epurasitiki
Assortance yemhando yepamusoro
Wese mushandi mune yega yega maitiro anozviongorora-ega.
Mushandi mune inotevera maitiro anoongorora iyo yapfuura.
QC ine yekufambisa inokurudzira kweese maitiro uye inorekodha zvakanyanya.
Asati aendesa, QC maitiro ekuteedzera ekukurudzira zvisina kujairika.
Nyanzvi R & D timu uye timu yekutengesa.
Chengetedza 7/24 sevhisi.
Kusangana Nega zvinodiwa.
Mhedziso yakapedzwa pane yese odha maitiro.
Isu tinopinda Canton Fair gore rega.
Isu tinopinda chiratidziro kunze kwenyika, tinogona kusangana nevatengi takatarisana.
7th -9th Aprial, 2021, isu tinopinda 104th China chikafu neKunwa Fair kuChengdu guta. Met akawanda makambani akabatira pamwe uye ane yakanaka inoshanda panguva yefairy.this iri 3day, Vedu vashandi vekambani vakasvika pachiratidziro masikati eApril 6th, vakaronga chiratidziro ndokuratidzira chiratidziro. Waini uye zvekudya zvinounzwa kubva kuFrance, Spain, neItaly; matai matanhatu anozivikanwa ...
19 Kukadzi, 2021, kambani iyi yakaita musangano wekuvhura mushure mezororo reCNY. Vashandi vese vakaita pic kufekitori, vozoenda kuresitorendi kunopemberera. Panguva imwecheteyo, kupihwa vashandi vakatanhamara mukati megore ra2020. Nhanho inonyanya kukosha ndeyekuti mukuru webasa ave nehurukuro, "nhasi kupemberera kwete kwekusangana chete asi kudarika zvinangwa zvedu zvitsva muna 2021, kubudirira uku hakukwanisike pasina te yedu inoshamisa ...
Muchirimo cha2020, kambani yakaronga kubuda kwechirimo kwevashandi. Chinangwa chekubuda kwechirimo uku kuwedzera mufaro wevashandi uye kuwedzera kushingairira kwevashandi. Chinangwa chekambani yedu Kubatana, kutsvaga chokwadi, hunyanzvi. Iko kuenda kwekubuda kwechirimo uku Qingdao No. 1 Kugeza Gungwa. Qingdao No. 1 Kugeza Beach, inozivikanwawo seHuiquan Beach, iri muHuiquan Bay, Qingdao Guta. Izvo ...